प्रचण्डको विश्लेषण : वैकल्पिक सरकारका लागि देउवा सकारात्मक प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनका लागि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अविश्वास प्रस्ताव उपयुक्त विकल्प रहेको माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। तर, माओवादी एक्लै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने स्थितिमा नहुँदा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ खोजिरहेको छ। धैर्यकान्त दत्त
संसदपछि अब प्रधानमन्त्रीको निसाना सभामुख
जहाँ उनले एमसीसीको नाम त लिएनन् तर एमसीसीको विषयलाई लिएर आफूमाथि भइरहेको प्रहारबारे सबैले बुझ्ने ढंगले प्रतिक्रिया दिए। अर्थात् अर्को भाषामा भन्दा सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओली र एमसीसीमो नामै नलिइ उक्त विषयका सम्बन्धमा काउन्टर दिए। सृजना घिमिरे
चीनलाई चुनौती दिइरहेका ‘विद्रोही’ अर्बपति
उनको स्वामित्वमा प्रकाशन हुँदै आएको दैनिक पत्रिका एप्पल डेली र डिजिटल पत्रिका ‘नेक्स्ट’ हङकङमा सबैभन्दा धेरै पढिने पत्रिका हुन्। हङकङमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चीनको भय लगातार बढिरहेको छ। तर पनि जिमीका यी सञ्चारमाध्यमहरू चीनको आलोचना गर्न कहिलै पनि हिचकिचाएनन्। आयोमेल संवाददाता
वर्ष २०७७ : बामे सर्न थालेको खेलकुदमा फेरि कोरोना प्रहार!
एकपटक पुनः मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन थालेको छ। संक्रमण बढ्दै गएका छन्। पुुनः लकडाउनमा जानुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन्। भर्खरै बामे सर्न थालेको खेल क्षेत्र पुनः पछारिँदै गरेको दृष्य खेलप्रेमिका आँखामा नाच्न थालेका छन्। गोविन्द जोशी
कोरोना महामारीका कारण मानवीय स्रोत र आर्थिक स्रोतको ठूलो क्षति हुनुका साथै अभिभावक र विद्यार्थीमा मानसिक समस्या निम्त्याएको बताउँछन् नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। ‘कति अभिभावकहरुले ज्यान गुमाए, संक्रमित हुनुपर्‍यो र विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाएर घरमै बस्दा बालबालिकादेखि अभिभावकसम्म निराश भएका छन्,’ उनी भन्छन्। अनिता श्रेष्ठ
विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो। अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरु पेश हुन सकेनन्। सत्तापक्षले नै संसद बहिस्कार गर्‍यो। प्रतिपक्ष वेल घेराउ गर्दै नारावाजीमा उत्रियो। ऐतिहासिक पुनःस्थापना नाम मात्रको सावित बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री र सरकारका अन्य व्यक्तिको संसदप्रतिको धारण बदलिएन। र पुनःस्थापनाले पनि सार्थकता पाउन सकेन। सृजना घिमिरे
ओलीसँग नझुक्ने बरु समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउँदै लगेर नयाँ पार्टीको तयारी गर्ने यो समूहको योजना छ। ‘केहीदिनभित्रै नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ । कार्यालय त खोजिरहेका छौं, भेटिन्छ । समानान्तर गतिविधि गर्दै नयाँ पार्टीको आधारशिला तयार पार्ने हाम्रो योजनाहो,’ आयोमेलसँगको कुराकानीमा नेपालसमूहका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। सृजना घिमिरे
तरकारी बजारभरि क्युआर कोड : व्यापारीका आफ्नै अनुभव
राजधानीमा सानादेखि ठूला तरकारी बजारमा ‘क्युआर कोड’ मार्फत तरकारी तथा फलफूलको आर्थिक कारोबार गर्न थालिएको धेरै भएको छैन। नगदरहित कारोबार गराउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो समय व्यापकरूपमा क्युआर कोड सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। अशिम सापकोटा
‘बैंक अफ किड्नी’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम कमाएको काभ्रेपलाञ्चोकमा करिब तीन वर्षदेखि मिर्गौला तस्करीको घटना बाहिर आएको छैन। कोरोना सन्त्रासका बीच तस्करी नभएको विश्वास गरिए पनि त्यसअघि करिब एक वर्ष १० महिनाको अवधिमा समेत मिर्गौला तस्करीका घटना बाहिर आएनन्। आयोमेल संवाददाता
सशस्त्र र नेपाल प्रहरी : संरचना र कार्य सञ्चालन उस्तै, सेवा सुविधामा भने व्यापक विभेद
संगठन संरचना, कर्तव्य, कार्य सञ्चालन प्रकृया जस्ता कुराहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच धेरै समानता पाइन्छ। नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ कै स्वरुपमा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बनेको हो। प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बीच धेरै कुरामा समानता छ। दफा, शब्द, लेखन र संयोजनसमेतमा दुवै ऐनमा धेरै हदसम्म समानता पाइन्छ। अनिता श्रेष्ठ
लकडाउन : सर्वोच्चमा ४८ वटा कोरोनाका मुद्दा, के आदेश भए?
गत वर्षको चैत ११ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो। संक्रमणको त्राससँगै देशमा धेरै विषयमा अनियमितता र असहज स्थिति आइपरे। यसको समाधान तथा सरकार र सरोकालवालालाई खबरदारी गर्नका लागि अदालतमा थुप्रै मुद्दा दर्ता भए। अनिता श्रेष्ठ
‘देशका सबै रुख काटेर, सबै जंगल मासेर विकास गरौं भनेको होइन। तर, यसको मतलव विकास नै चाहिन्न भन्ने पनि होइन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसारमै विकासले वातावरणमा प्रभाव पार्नुहुन्न भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। तर, यो पनि सत्य हो कि विकासका हरेक लहरले कुनै न कुनै विनाश गरेकै हुन्छ।’ गजेन्द्र बाेहरा
किन बढिरहेको छ महिलाहरुमा कानुन विषयप्रति आकर्षण?
नयाँ पुस्ताहरु पुरुष र महिला बराबरी शिक्षित हुँदैछन् भने महिलाहरुमा झनै बढी जागरुकता आएको छ। ‘उनीहरुले आफ्नो घर, परिवार तथा छिमेकमा देख्दै आएको कुरालाई मनदेखि नै आफूले पनि केही गर्छु भनेर जोश र प्रण लिएको हुन सक्छ, जसले गर्दा सबै क्षेत्रमा धेरै संख्या देख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्। अनिता श्रेष्ठ
सरकारले लुकाइराखेको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ?
‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए अहिले मुद्दा बनिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पनि बल पुग्नसक्छ’ आयोगका ती सदस्य भन्छन् ‘त्यो बेलै सार्वजनिक भएको भए सायद उनीहरूको फैसला नै अर्कै हुनसक्थ्यो।’ गजेन्द्र बाेहरा